トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ お金を消費者金融で借りるメリットとデメリット
Sezvo nzvimbo kukwereta mari, pane kuti sei kushandisa mutengi mari kunze mabhanga. Kunyange kushambadza munda
CM uye magazini yakadaro, Ndakaona zita kambani, iwe unofanira vanhu mazhinji kuti.
Naizvozvo, une pamwechete zvinhu zvakanakira nekuipira kuti kukwereta mari mutengi mari?
nevatengi mari pamusoro zvakanakira kushandisa Mutengi mari, kana kare sezvinoita Sarah ndarama, kuti unyanzvi kana kunzi Machikin.
zvino, kana vemumapato kubhangi, pamusoro zviri nyore kushandisa uye vanogona dzinoenderana kushandiswa Indaneti, vanhu vazhinji yakavimbika nounyanzvi haangavi rakaiswa pamusoro nokukwereta.
2 mumwe inotevera zvakanakira kushandisa yakadaro Mutengi mari zvichabviswa arimo.
vanogona kutsungirira pakarepo mari nokukurumidza caching
Wokutanga kutaurwa ndivo sezvo kubatsira
nevatengi mari ndiyo nokukurumidza caching. Kupfupika kubva
chikumbiro, saka unogona kupedza kuongorora mumaminitsi anenge 30 kusvika 1 awa, zvichiita kuti zvive nyore uyewo inowanika nyaya zvashata.
Zvanzi zvava zvinogoneka veMubatanidzwa unmanned chikwereti michina. Kunyange kana pasina chitoro pedyo
, iwe kunyoresa kuongorora uchishandisa unmanned chikwereti michina iri guta.
pano, mushure mafomu magwaro anodiwa, asi ave navo kunze kuongorora nepfumo parunhare munhu aitarisira, iyo haatori maminitsi anenge 30.
More ichangopfuura, anewo kuwedzera nhamba makambani kunyoresa kuti nokukwereta kubva akadai ngwara dzeserura. Chete basa pamukova
zuva rekuzvarwa uye nzvimbo basa uye mari, asi kunogona kuitwa nyore kuongorora kushanda ndiyo zvazvakanakira. Documents kuti zvinodiwa mushure
kuongororwa kwapfuura, kuwedzera kutuma kubva unmanned chibvumirano michina, zviri Zvinogonekawo kuita nzira neposvo.
nyore kunzwisisa uye iri nyore Kuripwa maitirwo
Kana iwe kwereta mari
nevatengi mari, kubvisa kudiwa guarantors uye rubatso sezvo Kazhinji.
pamusoro payo, uye kuti vasaine kanoverengeka ari vakawanda esungano, sezvo zvichienzaniswa zvinhu zvakadai inosimbisa uye zvakadai yaitwa pashure zvakatora nguva kuongorora, pfungwa nzira iri nyore ndokwechokwadi uye zvakanakira. Sezvo
kuti chete ichi nyore muitiro, munguva handingadariki nguva, uyewo Features anogona kuitwa kushanda mune zvakadai runhare kana Indaneti. Kana
mune ichi, hapana kunetseka pamusoro Pazvibato zvechizarira kuti mhuri neshamwari.
Zviri zvakare chinhu kuti yava nyore uyewo nokuripira nzira. Kuwedzera kurapwa pachishandiswa
hwindo, ipapo iwe mari kubva ATM iri vasina akavatarisa chitoro, unogona kubhadhara panguva zvimunakire chitoro ATM uye Indaneti rwezvemabhengi mumakore achangodarika.
uyewo pamusoro mevhiki pane vaya vakabatikana vashandi muhofisi, zvichava nyore kunzwa anogona kuripa vasina chakatsindirwa kwenguva.
chimbadzo pachinzvimbo pakukurumidza nzira ichiwedzerwa
Ritaurwe sezvo kuvamirira pemvura kushandisa
mutengi mari, ndiye kureba chimbadzo. Kunyange pasina
rubatso uye chinoratidza kuti yakatogadzirwa paImba yakakwirira mari pane achiita kuti kuderedza muunganidzwa ngozi.
Kuwedzera, kusungirira kushandawo atsive yakafanana wechikoro uye mubereko chibvumirano, chave pamwe Kazhinji nguva abhadhare anova refu. Kutarisa chete chemhosva huwandu
pamwedzi, 3000 Yen uye 5000 Yen uye duku kurongeka, vanhu vasiri vashoma kuti kushandisa rakawandisa catapult.
Zvisinei, hazvirevi kunyange mari yakakwana sezvo kuedza zvashata mutsividzo, kakawanda kacho kuti kubhadhara shoma mari mwedzi wose chete, Anova chimiro, akadai muripo chete mubereko, vaidavirawo kuti tirambe tisina kuderedza wechikoro . Naizvozvo
kutokurudzira mhosva nokuda, kushandisa chimbadzo 0 rutsigiro.
Izvi, ari kune vaya vakanga nokukwereta kokutanga ane akabhadhara kure mumwedzi wokutanga, kufarira prices zvinoreva urongwa kuva 0, ndiye zano yakati inokosha iri nevatengi mari.
Nokuramba kunyange kana unodzokera nemari kuti chakarongerwa pamwero sezvo vasingagoni kubhadharwa kure mumwedzi wokutanga, hatichamuzivi kunyange chemhosva kwanonoka, zvichava kukwanisa kudzivisa ngozi kufufutirwa kupinda okusava.
nevatengi mari ndechokuti zvinogona kuitwa kuongorora uye nokukwereta pokushandisa iri pfupi nguva.
kutora zviuru zvakawanda Yen masikati chaizvoizvo, zvichaita zvinogona kunzi vapone chikamu kurutivi kuti.
Ukuwo kuti, kuti chimbadzo ravira yakakwirira uye, kuti wechikoro zvakaoma vashoma vachange dzakanyorwa panguva muripo. Kuti uratidzwe kunyange CM pamusoro
nevatengi mari, gare gare kuti arege kuva kunorwadza, ngatiedzei kuita anonzwisisa hapana nokuripira urongwa.
Kuwedzera, akarumbidza kuti arambe chaizvo kana paine hurongwa kuva, kubva nevatengi mari mumwe nomumwe-web page iri nokuti zvikasaitika.
Nakaniwa, zvingava akakwana kuti mutsividzo nzira kusarudza zano kwavo pachavo. It
kudzokera nokuchenjera kukwereta nokuchenjera, mutengi mari kana izvi zvichiita kuti achava simba shamwari.
vakarondedzera / zvakanakira nekuipira nokukwereta mari iri mubhengi